Ny atao hoe Welding Procedure Qualification Welding Procedure Qualification (Welding Procedure Qualification, antsoina hoe WPQ) dia ny fizotran'ny fitsapana ary ny fanombanana ny valiny amin'ny fanamarinana ny maha-marina ny fomba fanodinana welding. Ny mari-pahaizana momba ny fomba welding dia fepetra lehibe ...
Fampiharana sehatry ny famonoana mandeha ho azy Miaraka amin'ny fampandrosoana toekarena, miankina betsaka amin'ny filan'ny angovo ny olona. Fitaovana fitaterana angovo ny fitaterana fantsona. Milamina sy ara-toekarena izy io ary noho izany dia be mpampiasa. Ny a ...
Izy io dia fironana amin'ny fananganana fantsom-pandaharam-pahendrena amin'ny ho avy hampiasa milina fantsom-pahefana mandeha ho azy. Mazava ho azy ny fironana takiana feno amin'ny milina fantsom-pahefana mandeha ho azy. Ny fantsom-pifaneraserana mandeha ho azy amin'ny tena heviny dia azo antoka ...
Fampidirana milina fantsom-pohy mandeha ho azy
Ny welding mandeha ho azy dia antsoina hoe welding fantsona mandeha ho azy toerana rehetra. Ampiasaina izy io rehefa raikitra ny fantsom-by, mihodinkodina manodidina ny fantsom-by ny lohan'ny vy, mahatsikaritra ny fametahana ny fantsona fantsona mitsivalana, miakatra ary miakatra hatrany. Th ...
Fisafidianana ny dingana fanamafisana
Fomba fihinanan-tariby fantsom-bozaka mandeha ho azy: ny fahamoran'ny famahanana tariby dia misy fiantraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny welding. Ny fomba famahanana tariby dia azo zaraina amin'ny fomba roa: ny fanaovana sary an-tariby sy ny fanosehana tariby. Rehefa tarihina ny tariby, ny basy welding dia manakaiky kokoa ny toerana fametrahana ny tariby ...
Fitaovana fantsom-boaloboka mandeha ho azy azo fehezina
Ny famoronana milina fantsom-pahefana mandeha amin'ny paompy dia mahatsapa ny fametahana tsy voafehy ary mamaha ny olana fa ny fananganana fantsom-pitrandrahana petrochemical dia tsy azo fefy tanana. Ny masinina rehetra toerana milina fantsom-pifandraisana mandeha ho azy dia karazana automa ...
Status ankehitriny sy fironana fanamafisana mandeha ho azy
Ny satan'ny ankehitriny sy ny fironana amin'ny fantsom-bozaka mandeha ho azy ho an'ny famatsian-drano solika sy entona eto an-toerana ary ny indostrian'ny fantsona hafa dia azo ampiasaina amin'ny fantson-drano fantsom-panafody, fantsom-pandrefesana, fantson-tsindrina, fantson-tànana, famenoana fantsona ary fonosana ...
Inona avy ireo fomba fanao fampiasa matetika amin'ny fametahana fantsona lavitra
Inona avy ireo fomba fanao fampiasa matetika amin'ny fantson-drano lavitra ankehitriny, ny fomba fametrahana sy fantsom-bozaka ampiasaina matetika ho an'ny fantsom-pifandraisana lavitra ao an-trano sy any ivelany dia misy koa ny fantson-drivotra elektrônika, fantsom-bokotra tungsten argon manual, ary vy miempo sy entona miaro ampinga a ...
Ny fiantraikan'ny haingam-pandeha amin'ny famolahana
Ny fiantraikan'ny haingam-pandeha amin'ny famolavolana ny famolavolana Ny milina fantsom-pifaneraserana mandeha ho azy izay novokarin'i Tianjin Yixin Pipe Equipment Co., Ltd. dia nanamboatra ny fantson-drano sy ny fandefasana otrikarin'ny lohan'ny welding mba hahatsapany ny fantsona mandeha ho azy (5G welding) an'ny fantsona. Ny we ...
Fanamafisana mandeha ho azy ny fantsom-pifandraisana GMAW / FCAW
Ny fanodinana AUTOMATIKA AOTOMATIKA an'ny GMAW / FCAW PIPELINE dia nanjary lohahevitra mafana teo amin'ny fiarahamonina ankehitriny, ary fironana tsy azo ihodivirana eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy koa izy ireo. Ny fantsom-bozaka mandeha ho azy dia teknolojia fananganana welding izay ahafahan'ny ...
Inona no fanamafisana tsara indrindra? Ny ambony ve no tsara kokoa?
Ny e1 & e2 amin'ity sary manaraka ity dia midika hoe fanamafisana las. Ny halavirana fanampiny dia tsy vitan'ny fizotran'ny welding, fa misy fiatraikany amin'ny fiasan'ny sambo azo antoka, indrindra ny ain'ny havizanana. Vokany Ny fantson-tserin'ny sambo tsindry matetika dia fantsona maro an'isa (su ...
Rafitra fenitra ISO sy EN welding
Araka ny fizarana anatiny an'ny ISO / TC44, ny famolavolana sy ny fanitsiana ny fenitra fanamafisany azy dia tompon'andraikitra manokana amin'ny komity kely tsirairay (SC). Ny fanasokajiana ireo zavatra mahazatra dia mizara ho sokajy 9 arakaraka ny filaharana: materials Fitaovana fantsona, (avy amin'i SC3); ②Test ...